श्रावण ४, २०७६ ०३:५६:०१
पौडी खेल्ने क्रममा पाेखरीमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु श्रावण १, २०७६
गढी गाउँपालिकाको स्ल्याबबारे समाचार लेखेको भन्दै पत्रकारलाई धम्की श्रावण १, २०७६
इलाममा हतियारसहित २ पक्राउ असार ३१, २०७६
आज सुनको मूल्य कति ? मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रतितोला फाइन गुणस्तरको सुन ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन पनि तोलामा ६४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । असार ३१, २०७६
फिल्म ’माछा माछा’को फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक फिल्म ’माछा माछा’को फर्स्ट लुक पोस्टर रिलिज भएको छ । फिल्ममा सुनिल गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको छ । असार ३१, २०७६
वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ? पछिल्लो समय विश्वमा यौन सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । असार ३१, २०७६
के गर्भावस्थामा नरिवल खाँदा साँच्चै बच्चा गोरो जन्मिन्छ ? केही भ्रम र यथार्थ यस्ता छन् महिला गर्भवती भएदेखि नै उसको हेरचाहका लागि मानिसहरुले विभिन्न औषधिउपचारमा जुट्छन् । महिलाको स्याहार गर्न तल्लिन हुन्छन् । असार ३१, २०७६
यसरी भएको थियो सलमान–कैटरीनाको पहिलो भेट आज ३६ औँ जन्मदिन मनाइरहेकी बलिउड अभिनेत्री कैटरीना कैफ उद्योगकै बोल्ड अभिनेत्रीमा एक हुन् । उनी फिल्मका कारण मात्र होइन प्रेम सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा आइरहन्छिन् । असार ३१, २०७६
यी हुन् १२ भारतीय मुलका चर्चित पोर्न स्टार पोर्न स्टारका रुपमा पहिचान बनाइसकेकी सन्नी लियोन अहिले बलिउडकी लोकप्रिय स्टारमा गनिन्छिन् । सन्नी लियोनको जन्म १३ मई १९८१ म क्यानडामा पन्जाबी शिख परिवारमा भएको हो । असार ३१, २०७६
छविराज ओझामाथि शिल्पा पोखरेलको आरोप- बारम्बार मार्छु भनेर धम्की आयो निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको घरायशी झगडाले अन्तत: डिभोर्सको रुप लिएको छ । नायिका शिल्पा पोखरेले आफूले पारपाचुकेको प्रक्रियामा गएको बताएकी छिन् । शिल्पाले निर्माता ओझामाथि आफ्नो हत्या गर्ने प्रयास गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । असार ३१, २०७६
कृषि विकास बैंकमा जागिर खुल्यो कृषि विकास बैक लिमिटेडले विभिन्न पदमा ३ सय ८४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ कर्मचारी दरबन्दीमा रिक्त रहेको विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको हो । असार ३१, २०७६
पतिका लागि कन्डम लिन आफै जान्छन् पत्नीहरू गाउँ घर मात्र होइन, शहर पनि अस्थायी साधनका बारेमा अझै खुलेर बहस गर्न तयार देखिन्न । यस्ताे अवस्थामा महिलाहरूमा अस्थायी साधनकाे रूचि बढेकाे हाे ।बागलुङ जिल्लामा महिलाहरूमा अस्थायी साधनकाे प्रयाेग बढ्दै गएकाे छ । पुरुषमासमेत एक किसिमको लाज र संकुचन देखिन्छ । महिलाहरु, त्यसमा पनि दुरदारजका पढ्न, लेख्न र अवसरले पछाडि परेकाहरु यस्ता विषयमा कति खुल्लान् ? सामान्यतयाः कठिन उत्तर आए पनि जिल्लाको दुर्गम खुंखानीका महिलाका हकमा यो जवाफ गलत सावित हुन्छ । असार ३१, २०७६
आइसिसीको नयाँ बरियाता, कोहली र बुमराह शीर्ष स्थानमा एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट समापन भएसँगै विश्व क्रिकेटको प्रशासकीय निकाय आइसिसीले नयाँ बरियता क्रम सार्वजनिक गरेको छ । असार ३१, २०७६